Social Media Marketing for 2018 Free Seminar | Myanmar Youth Empowerment Opportunities
Posted on November 29, 2017 by MYEO in Local //0Comments
Deadline : 10 December,2017
Location : Myanmar International Business Academy ( MICT ),No.(9) , 1st Floor , Hlaing Township, MICT Park,Yangon , Myanmar .
Duration : 1pm-3.30pm ( Saturday, 16 December,2017)
Description : 2018 တွင် Social Media များပေါ်၌ အသုံးပြုနိုင်မည့် Marketing များအကြောင်း နားထောင်လိုသူများအတွက် ဆရာအောင်မွန်ချမ်း Social Media Marketing နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေးသားထားတဲ့ Tips လေးတွေကိုလည်း ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁) လူတွေကိုပဲ Focus လုပ်ပါ။ လူတွေကို ဘယ်လိုကူညီရမလဲတွေးပါ။
၂) အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲနေမယ့် industry ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်
လိုအပ်သလို လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲဖို့ မကြောက်ပါနဲ့။
၃) စမ်းသပ်ပါ။ အသစ်လုပ်ဖို့မကြောက်နဲ့။
၄) လူတွေကို စက်ရုပ်လို မတုံ့ပြန်ပါနဲ့။ အပြင်မှာပြောဆိုဆက်ဆံသလိုပဲ
Social Media ပေါ်မှာလဲ ဆက်ဆံရပါမယ်။ ကြိုတင်ရေးထားတဲ့
Customer Service Script တွေဟာ အသုံးမဝင်ပါ။
၅) ကိုယ့်ကိုမေးတဲ့ မေးခွန်းတိုင်းကို ဖြေပေးဖို့ ကြိုးစားပါ။
၆) ပိုက်ဆံပေး boost လို့ရလာတဲ့ Audience တွေကိုပဲ မှီခိုမနေပါနဲ့၊
လူတွေကို ကူညီရင်း ကိုယ့်ကိုလဲ ပြန်ပြီး ကူညီပေးနိုင်မယ့် audience တစ်ခု တည်ဆောက်ပါ။
၇) Engagement ကို Focus လုပ်ပါ။
၈) Social Media ပေါ်က စကားဝိုင်း၊ ဆွေးနွေးမှုတွေကို ဝင်ပါ။ ဆွေးနွေးပါ။
၉) ကိုယ့် Product အကြောင်းချည်းပဲမပြောပါနဲ့။
ကိုယ့် audience ဘာလိုချင်တာလဲ၊ ဘာစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတာ သိပါ။
၁၀) ပြန်လည်မျှဝေကြမယ့် Content မျိုးတွေ ဖန်တီးပါ။
၁၁) မိုဘိုင်းလ်ကနေ ကြည့်ရတာအဆင်ပြေမယ့်
Mobile Responsiveness ကိုလဲ မမေ့ပါနဲ့။
၁၂) တိကျတဲ့ Objective သို့မဟုတ် Goal တွေရှိရပါမယ်။
Social Media Strategy ကို အဲဒီ Objective ပေါ်မှာ မှီတည်ပြီး တည်ဆောက်ပါ။
၁၃) အချိန်တစ်ခုစောင့်ကြည့်ပြီး ရယူထားတဲ့ Data ပေါ်အခြေခံပြီးမှ ရလာမယ့်
insights တွေကို သုံးပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။ အချိန်တိုအတွင်း အမြန်မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။
၁၄) ကိုယ့် brand ရဲ့ reputation (ဂုဏ်သိက္ခာ) ကိုတည်ဆောက်ပါ။
အပေါ်ရောက်ဖို့ချည်းပဲ မတွေးပါနဲ့။ အပေါ်ကို ဘယ်လိုရောက်လာသလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းကလဲ အရေးကြီးပါတယ်။
၁၅) ကိုယ့်အပေါ်မှာ ကိုယ့် brand ပေါ်မှာ သစ္စာရှိလာမယ့် Brand Loyalty ကို တည်ဆောက်ပါ။
၁၆) ကိုယ့်ရဲ့ Objective ကိုရောက်ဖို့ ကူညီပေးနိုင်မယ့် Social Platform ပေါ်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။
သူများလုပ်လို့ လိုက်လုပ်တာမျိုး၊ ရှိရှိသမျှ Social တွေပေါ်မှာ ရှိနေဖို့ ကြိုးစားတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။
To register : You can contact 09964785999, 09252228889.
*တစ်ယောက်လျှင် (10,000 Kyats) ပေးသွင်း၍ ဒီဇင်ဘာ (10) ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား စာရင်းပေးရပါမည်။
*ပွဲတက်ရောက်သည့်နေ့တွင် အဆိုပါ (10,000 Kyats) အားပြန်လည်ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
*Seminar ပွဲတွင် လာရောက်သူများအတွက် အထူးအစီအစဉ်အနေဖြင့် IQN, UK မှ ချီးမြှင့်သော
Diploma in Marketing သင်တန်းကို အပ်နှံပါက (100,000 Kyats) Discount ရရှိပါမည်။
*လူဦးရေ (70) သာကန့်သတ်ထားပါသဖြင့် အချိန်မှီ စာရင်းပေးသွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
Description : 2018 တှငျ Social Media မြားပျေါ၌ အသုံးပွုနိုငျမညျ့ Marketing မြားအကွောငျး နားထောငျလိုသူမြားအတှကျ ဆရာအောငျမှနျခမျြး Social Media Marketing နဲ့ ပတျသကျပွီး ရေးသားထားတဲ့ Tips လေးတှကေိုလညျး ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁) လူတှကေိုပဲ Focus လုပျပါ။ လူတှကေို ဘယျလိုကူညီရမလဲတှေးပါ။
၂) အခြိနျနဲ့အမြှ ပွောငျးလဲနမေယျ့ industry ထဲမှာဖွဈတဲ့အတှကျ
လိုအပျသလို လိုကျပွီး ပွောငျးလဲဖို့ မကွောကျပါနဲ့။
၃) စမျးသပျပါ။ အသဈလုပျဖို့မကွောကျနဲ့။
၄) လူတှကေို စကျရုပျလို မတုံ့ပွနျပါနဲ့။ အပွငျမှာပွောဆိုဆကျဆံသလိုပဲ
Social Media ပျေါမှာလဲ ဆကျဆံရပါမယျ။ ကွိုတငျရေးထားတဲ့
Customer Service Script တှဟော အသုံးမဝငျပါ။
၅) ကိုယျ့ကိုမေးတဲ့ မေးခှနျးတိုငျးကို ဖွပေေးဖို့ ကွိုးစားပါ။
၆) ပိုကျဆံပေး boost လို့ရလာတဲ့ Audience တှကေိုပဲ မှီခိုမနပေါနဲ့၊
လူတှကေို ကူညီရငျး ကိုယျ့ကိုလဲ ပွနျပွီး ကူညီပေးနိုငျမယျ့ audience တဈခု တညျဆောကျပါ။
၇) Engagement ကို Focus လုပျပါ။
၈) Social Media ပျေါက စကားဝိုငျး၊ ဆှေးနှေးမှုတှကေို ဝငျပါ။ ဆှေးနှေးပါ။
၉) ကိုယျ့ Product အကွောငျးခညျြးပဲမပွောပါနဲ့။
ကိုယျ့ audience ဘာလိုခငျြတာလဲ၊ ဘာစိတျဝငျစားလဲဆိုတာ သိပါ။
၁၀) ပွနျလညျမြှဝကွေမယျ့ Content မြိုးတှေ ဖနျတီးပါ။
၁၁) မိုဘိုငျးလျကနေ ကွညျ့ရတာအဆငျပွမေယျ့
Mobile Responsiveness ကိုလဲ မမပေ့ါနဲ့။
၁၂) တိကတြဲ့ Objective သို့မဟုတျ Goal တှရှေိရပါမယျ။
Social Media Strategy ကို အဲဒီ Objective ပျေါမှာ မှီတညျပွီး တညျဆောကျပါ။
၁၃) အခြိနျတဈခုစောငျ့ကွညျ့ပွီး ရယူထားတဲ့ Data ပျေါအခွခေံပွီးမှ ရလာမယျ့
insights တှကေို သုံးပွီး ဆုံးဖွတျခကျြခပြါ။ အခြိနျတိုအတှငျး အမွနျမဆုံးဖွတျပါနဲ့။
၁၄) ကိုယျ့ brand ရဲ့ reputation (ဂုဏျသိက်ခာ) ကိုတညျဆောကျပါ။
အပျေါရောကျဖို့ခညျြးပဲ မတှေးပါနဲ့။ အပျေါကို ဘယျလိုရောကျလာသလဲဆိုတဲ့ နညျးလမျးကလဲ အရေးကွီးပါတယျ။
၁၅) ကိုယျ့အပျေါမှာ ကိုယျ့ brand ပျေါမှာ သစ်စာရှိလာမယျ့ Brand Loyalty ကို တညျဆောကျပါ။
၁၆) ကိုယျ့ရဲ့ Objective ကိုရောကျဖို့ ကူညီပေးနိုငျမယျ့ Social Platform ပျေါမှာ ရငျးနှီးမွှုပျနှံပါ။
သူမြားလုပျလို့ လိုကျလုပျတာမြိုး၊ ရှိရှိသမြှ Social တှပေျေါမှာ ရှိနဖေို့ ကွိုးစားတာမြိုး မလုပျပါနဲ့။
*တဈယောကျလြှငျ (10,000 Kyats) ပေးသှငျး၍ ဒီဇငျဘာ (10) ရကျနနေ့ောကျဆုံးထား စာရငျးပေးရပါမညျ။
*ပှဲတကျရောကျသညျ့နတှေ့ငျ အဆိုပါ (10,000 Kyats) အားပွနျလညျပေးအပျမညျဖွဈပါသညျ။
*Seminar ပှဲတှငျ လာရောကျသူမြားအတှကျ အထူးအစီအစဉျအနဖွေငျ့ IQN, UK မှ ခြီးမွှငျ့သော
Diploma in Marketing သငျတနျးကို အပျနှံပါက (100,000 Kyats) Discount ရရှိပါမညျ။
*လူဦးရေ (70) သာကနျ့သတျထားပါသဖွငျ့ အခြိနျမှီ စာရငျးပေးသှငျးရနျလိုအပျပါသညျ။
For more information,you can visit official facebook page.